Tangalamena, Sojabe : Hanangana ny Filan-kevitry ny Olon-kendry -
AccueilRaharaham-pirenenaTangalamena, Sojabe : Hanangana ny Filan-kevitry ny Olon-kendry
Fampandrosoana no tanjona. Izay hatrany no katsahin’ny Fitondram-panjakana tarihin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina. Araka izany, nihaona tamin’ireo Tangalamena, Sojabe na/sy ireo Raiamandreny tamin’ireo Faritra roa, Boeny sy Betsiboka, ny minisitry ny Serasera sy ny Fifandraisana amin’ny Andrim-panjakana sady minisitra mpiahy ny Faritra Boeny, Harry Laurent Rahajason, sy ny sekreteram-panjakana misahana ny Fifandraisana sy ny Fampandrosoana eo anivon’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny, Bary Rafatrolaza.
Tamin’izany indrindra no nahafahan’ireo Tangalamena sy Sojabe ary ireo filohana Fikambanana tamin’ireo Faritra roa ireo nanambara ny finiavany sy ny firaisan-keviny amin’ny Fanjakana amin’ny fampandrosoana.
Araka izany, nambaran’ny minisitra Harry Laurent Rahajason nandritra ny fihaonana fa hatsangana na/sy mila hatsangana ny Filan-kevitry ny Olon-kendry amin’ireo Faritra roa ireo. Izany no atao mba hampivondronana ireo Raiamandreny, Tangalamena, Sojabe mba ahafaha-manamora ny famanampiana ho amin’ireo tetikasa-pampandrosoana maro isan-karazany amin’iny faritr’i Mahajanga iny.
Izay rahateo ihany koa ny tenin’ny Filoham-pirenena amin’ny fomba fijery ho amin’ny fampandrosoana iraisana sy mahomby ary hifampizarana ary ny lalana ho amin’izany efa hita soritra sahady.
Mila mandray andraikitra tandrify azy amin’izany fampandrosoana izany ny tsirairay ary tsy afa-miala amin’izany koa ny Sojabe, Tangalamena, Raiamandreny sy ireo filohana Fikambanana rejionaly. Indrindra indrindra ho amin’ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana. “Hifanome tanana isika, hisarika ny mpiray monina amitsika ho amin’ny lala-marina sy tsara, izay mitondra antsika mankany amin’ny tena fampandrosoana. Manao antso avo aminareo aho mba hivondrona ahafahantsika mandroso sy miasa miaraka mba ho tombontsoan’ny vahoaka sy ny firenena”, hoy ny minisitra Harry Laurent Rahajason.
Ankoatra izay, nanome toky kosa ireo Raiamandreny, Tangalamena, Sojabe fa hiara-dia sy hifanome tanana amin’ny governemanta amin’ny fanatanterahana sy fametrahana ireo tetikasa-pampandrosoana.
Tanjona tamin’ny fihaonana kosa, hoy hatrany ny minisitra, ny mba hisian’ny fandrindrana ny ezaka eo amin’ny governemanta sy ny Filan-kevitry ny Olon-kendry. Ohatra ho an’ireo Faritra maro manerana ny Nosy iny fihaonana iny mba hanamafisana ny fandrindrana ho amin’ny fampandrosoana.
Tsy mahafeno ny fepetra takian’ny lalàna mifehy ny satan’ny antoko mpanohitra ( lalàna n° 20111-013 tamin’ny 9 septambra 2011) ny taratasy filatsahan-kotendrena an’i Hajo Andrianainarivelo ho eo amin’ny toeran’ny mpanohitra. Nolavin’ny Fitsarana avo momba ny ...Tohiny